Weeraro Ka Kala Dhacay Muqdisho Iyo Jubada Hoose. – Shabakadda Amiirnuur
November 27, 2017 6:20 pm by admin Views: 310
Dagaal la isku adeegsaday hubka culus iyo midka fudud ayaa ka dhacay degmada Heliwaa ee magaalada Muqdisho kadib markii askar ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ay weerareen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada DF.
Wararku waxay sheegayaan in dagaal toos ah lagu qaaday Warshaddii hore ee Barfuunka oo saldhig u ah askarta dowladda kuna taalla isgoyska SOS.
Sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay rasaasta ayaa muddo socotay, lamana oga inta uu la eg yahay khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Intaa waxa dheer dilal qorsheysan oo Muqdisho iyo duleedkeeda loogu geystay askar ka tirsan ciidamada dowladda. Askari ayaa lagu toogtay degmada Yaaqshiid, halka mid kale lagu dilay nawaaxiga Tabeelaha Sh/Ibraahim oo u dhow degaanka KM13.
Sidoo kale ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa duleedka degaanka Taabto ee gobolka Jubada hoose ku weeraray kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada Kenya, waxaana ay ka gubeen gaari gaashaaman oo Taw ah.
Kolonyadan oo ku socodaalaysay inta u dhaxaysa Taabto iyo Dhoobley ayaa marka laga yimaado gaariga laga gubay waxaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.